Maqal: Howlgalo dad lagu qabqabtay Oo maanta laga fuliyay Deg Wadajir Muqdisho – SBC
Maqal: Howlgalo dad lagu qabqabtay Oo maanta laga fuliyay Deg Wadajir Muqdisho
Xaafada Buulo xuubey ee degmada wada Jir magaalada Muqdisho saaka waxaa ka bilowday Howlgal balaaran oo ay ciidamada Nabadsugida iyo Police-ka degmadaasi wada fulunayeen .
Howlgalkaas ayaa sida la sheegay waxaa lagu sugayay amaanka Degmadaasi waxaana Beryihii ugu dambeeyay uu ka socday Xaafadaha qaar ee degmooyinka magaalada Caasimada ah ee Muqdisho.
Axmed Xasan Cadow oo looyaqaano Axmed Daaci waa gudoomiyaha degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho waxaana uu sid gaar ah ula hadlay xafiiska SBC International ee magaalada Muqdisho, isagoo sheegay in Howlgalkaasi ay soo qaban qaabiyeen maamulkiisa ayna kala kaashanayaan wasaarada arimaha gudaha iyo Amniga qaranka Xukuumada Federaalka ah.
“Ma ahan howlgalkan mid lagu raafayo dadka balse waxaa lagu soo qab qabanayaa dadka loogu shakisanyahay in ay ku lug leeyihiin amaan darida” sidaasi waxa yiri gudoomiyaha Degmada wadajir Axmed Daaci.
Dad tiro badan ayay ciidanka ku qabteen intii uu howlgalku soconayay, waxaana dadkaasi qaarkood oo markii wax lagu waayay lasoo daayay la hadlay xafiiska SBC ay sheegeen in la geeyay xarumaha sirbaareyaasha Hay’ada Dembi baarista balse wax dembi ah lagu waayay lana soo siidaayay.
Maalmihii ugu dambeeyay ciidamada waxa ay howlgal balaaran ugu jireen sidii loo soo qaban lahaa dadka amaan darida ka wada magaalada iyagoo guri guri u galayay xaafadaha degmooyinka magaalada Muqdisho .
Dhageyso Warbixin Faah faahin oo uu noosoo diray wariye Maxamuud Cismaan Warsame Daacad. RIIX AMA DAAR
Maalmo ka hor ayay aheyd markii uu shaaca ka qaaday Afhayeenka ciidamada Amisom in howlgalada baarista ah ay noqonayaan kuwo habeen iyo maalinba socon doona ayna iskala kaashan doonaan markii ugu horeysay ciidamada Amisom iyo kuwa Police-ka Soomaalida.